Naya Bikalpa | » नेकपाका शिर्ष नेताले औंलो ठड्याएर तिमी हौं भ्रष्टाचारी भन्दाभन्दै पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउदैन नेकपाका शिर्ष नेताले औंलो ठड्याएर तिमी हौं भ्रष्टाचारी भन्दाभन्दै पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउदैन – Naya Bikalpa
नेकपाका शिर्ष नेताले औंलो ठड्याएर तिमी हौं भ्रष्टाचारी भन्दाभन्दै पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउदैन
प्रकाशित मिती: २०७६ जेष्ठ २७, ०९: ०६: ५५
नेपाली काँग्रेसले पहिलो चरणको जनजागरण अभियान सम्पन्न गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सशक्त भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला काँग्रेसका नेताहरु जनजागरण अभियान लिएर गाउँगाउँमा गएता पनि कार्यकर्तालाई आस्वस्त पार्न नसकेको नेताहरुलेनै बताइरहेका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा–नराम्रा कार्यहरुको समिक्षा तथा काँग्रेसका भावी कार्यनीतिका बारेमा नेपाली काँग्रेसका पूर्व मन्त्री एवं नेता मिन विश्वकर्मासँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकको लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः
वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि गर्नुभएको कार्यप्रति प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
स्वभाविक हो, घोषणापत्र जनताका बीचमा प्रस्तुत गरेर बहुमत प्राप्त गरेर जाने र विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा, स्थायित्वका कुरा, शान्तिका कुरा गर्ने स्वभाविक हुन् । आवश्यक पनि हो । तर कसरी विकास गर्दै हुनुहुन्छ ? कसरी समृद्धिमा लाँदै हुनुहुन्छ ? देशको शान्तिलाई कसरी अगाडि बढाइदै छ ? भन्ने कुरा चाँही एकातिर छ भने उहाँले गर्ने क्रियाकलाप र कार्यशैली चाँही फरक भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस्तो कार्यशैलीबाट समृद्धि र विकास असम्भव छ, त्यसैले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट स्थायित्व हुन्छ भन्ने कुराको असम्भव देखिन थालेको छ ।
त्यसोभए वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वबाट आर्थिक समृद्धि, देश विकास र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो मुलुक प्रतिपक्ष पनि छ । प्रतिपक्षको तर्फबाट मात्र नभइकन मेरो व्यक्तिगत अथवा आम नागरिकको दृष्टिकोण मात्रै नभएर उहाँकै सिङ्गो पार्टीकै समकक्षी शिर्ष नेताहरुबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरुन्जेलसम्म मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुँदैन भनेर उहाँहरुको मुखबाटै सुनिरहनु भएको छ नि ।
मैले भन्दा प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्यो भन्ने पर्न सक्छ । तर समग्र देशको राजनीतिक परिस्थति झन्झन् बिग्रदै गएकोले वर्तमान प्रधानमन्त्री रहुन्जेल मुलुकको विकास सम्भव देखिदैन । त्यसैले उहाँकै पार्टीका नेताहरुले भन्न थाल्नुभएको छ यदी केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री रही रहने हो भने पार्टी त सिद्धिन्छ, सिद्धिन्छ, मुलुकको अस्तित्वनै संकटमा पर्छ भन्ने सर्वत्र अभिव्यक्ति आइराखेको हुनाले मैले ज्यादा यसमा बोली रहनु पर्छ र तपाईले अन्र्तर्वाता लिइरहँदा इति वृत्तान्त सबै भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अहिले जनताले के भनिरहेका छन् भने, राजनीतिक दलका ठुला नेतादेखी साना नेतासम्म मिल्छन् र बाँडिचुडी खानेकुरामा सहमति गर्छन् भन्ने चर्चा पनि निकै चल्दै आएको छ, के त्यस्तै हो ?
यस्ता कुरा चाँही भ्रम मात्र हो भन्ने लाग्छ । जसले ज्यादा खान्छ, खाने कुरामा लालायित हुन्छ, खाने कुरामा फस्छ वा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन्छ भने म मात्रै होइन त्यसमा अरुपनि संलग्न छन् भन्छन् । जहाँजहाँ अख्तियारले छापा मारेर भ्रष्टाचारी, कर्मचारीलाई रङ्गे हात पक्रिन्छन् र उनीहरुको तत्कालको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो भने मैले मात्र कहाँ खाएको हो र माथिपनि पु¥याउनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउँछन् ।
त्यो किन हिजोअस्ति आएन ? पहिले किन आएन ? माथिकाले कमिसन मागे भनेर किन भनेन् ? हो, ठ्याक्कै त्यसैगरी अहिले यो नेकपाको दुइतिहाइको बहुमत आइसकेपछि आएका मितिदेखी आजका मितिसम्ममा जताततै ठुुलो परिणाममा भ्रष्टाचार भइराखेको छ र उनीहरु के भनिराखेका छन् भने हामी मात्र होइन यो पहिलेको सरकारमा पनि हुन्थ्यो । विगतमा पनि हुन्थ्यो ।
अरु पनि छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ । स्वयम् संवैधानिक निकायका प्रमुख व्यक्तिले सुन काण्डमा छापा मा¥यो प्रक्राउ पर्दा उहाँको बयान लिदाँखेरी म त सानो माछा हो, म भन्दा ठुला माछा पनि छन् भनेर अतालिएर दिएको अभिव्यक्ति पनि हामीले सुनेकै हौ । यो चाँही आपतविपत्मा अतालिएर बेहोसीमा दिएको अभिव्यक्ति हो । यदि नेपाली काँग्रेस पार्टी भित्रकै पनि त्यसमा संलग्न छन् भने नेता, कार्यकर्ता, माननीय सदस्य, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा कोहीपनि संलग्न छन् भने निर्दिष्ट एउटा साझा अभियान अन्तर्गत छानविन गरौं । कानुनमा दोषी ठहरिएका सबैलाई कारवाही अगाडि बढाऔं ।
तर भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको पनि मिलेमतो छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
यो कसैको गलत अनुमान र आरोप हो । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुुँदैन । अहिलेको सरकार गम्भीर रुपमा माफिया र तस्करको चङ्गुलमा छ भनेर स्वयम् पोलिटब्युरो भित्रका बहुमत सदस्यले भनेका छन् भने त्यसमा सत्तापक्षमा प्रभुत्व प्रतिपक्षको भन्ने कुरै भएन ।
जो–जो छन् तिनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ तर आफु बच्नका लागि अरुलाई आरोप लगाउनु चाँही अपराध हो । वाइडबडी प्रकरणकै कुरा गर्ने हो भने काँग्रेस पार्टीका नेताहरुको पनि नाम मुछिएको थियो,
तपाईहरु यस विषयमा मौन बस्न खोज्नुभएको हो ?
होइन, हाम्रो नाम आएकाले हामी मौन भएकै होइन । महालेखा परिक्षक कार्यालयबाट प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको थियो । त्यसैलाई च्यातेर काँग्रेसकै नेतृत्वमा भएको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषी ठहर ग¥यो ।
त्यो दोषी ठहर गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्नुपर्नेमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले अख्तियारलाई समेत चुनौति दिँदै अर्को एउटा आयोग बनाइ दियो । बाह्रमासे आयोग बनाएर अध्ययन, अनुसन्धान र मुद्वा चलाउने प्रक्रियालाईनै अलमल्याएर अख्तियारलाई यो सरकारले अप्रत्यक्ष रुपले खबरदारी ग¥यो । औला ठड्यायो । खबरदार ! यसमा तिमीहरुले कारवाही गरौला भन्यो । मेरो एउटा सानो आयोग बनाउँछु र यसले कारवाही गर्छ भन्यो । त्यसले पनि कारवाही गरेन । अख्तियारले पनि मुद्दा चलाएन ।
जो त्यसमा अभियुक्त थिए उनलाई षड्यन्त्र भनौ वा के भनौ विमान दुर्घटनामा परे । त्यसो भएको हुनाले सरकार यो सम्मको हर्कत गर्नको लागि पनि तयार भएको छ । अब यसको दोष पनि प्रतिपक्षले लिइदिनुपर्छ भनेर आरोप लगाउनु भनेको मुलुकको भविष्य झन् अन्धकार बनाउनु हो । ठुलाठुला भ्रष्टाचारका काण्ड यही सरकारले मच्याएको छ । ल्अभिि कै कुरा गर्ने हो भने पनि स्वयम् ल्अभिि कै मालिकले भनेका छन् कि नेकपाको सरकार अथवा नेकपा पार्टीलाई चुनाबमा १० अर्ब चुनाबी खर्च चन्दा दिएका छौं ।
नेकपा पार्टीले हामीलाई कर तिर्नुपर्दैन चन्दा दिनुस् भनेर माग्यो भनेका छन् । ल्अभिि का मालिकले त्यो पैसा फिर्ता दिनुस् म कर तिर्छु भनेका छन् । यत्रो प्रष्ट कुरा हुदाँहुँदै पनि नेकपा पार्टीभित्रै यस विषयमा खैलाबैला हुँदा पनि स्वयम् नेकपाका शिर्ष नेताले औलो ठड्याएर तिमी हौ भ्रष्टाचारी भन्दाभन्दै पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैन । अनि मिडियाकर्मी साथीहरुले होइन, यसमा नेपाली काँग्रेस पार्टी पनि छ की क्या हो भनेर अलमलिने काम गरिरहनु भएको छ ।
तर नेपाली काँग्रेस पार्टीका सभापतिको पनि संलग्नता छ भनेर बाहिर आएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
शेरबहादुर देउवाको संलग्नता छ भने ति ल्अभिि बाट छुट्ने, शेरबहादुर देउवाको संलग्नता छ भने वाइडबडीमा पनि कारवाही नहुने भन्ने कही संविधानमा लेखिएको छ र ? जो–जो संलग्न छन् सबैलाई कारवाही गर्न प¥यो नि त ।
भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीका अगाडि काल आएर उभिएर तलाई मार्छुु भन्दा होइन यसमा शेरबहादुर देउवा पनि छन् भनेर उनी बाँच्छन् ? बाँच्दैनन् नि त । यस्तो खालको तर्क गरेर जनतालाई भ्रम छर्न हुँदैन । जो–जो संलग्न छन् सबैलाई कारवाही गर्नुस् । शेरबहादुर देउवालाई कुनैपनि कारवाही नगर्नु भनेर संविधानमा पक्कै पनि लेखेको छैन होला ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीले जागरण अभियान लिएर जनताको बीचमा जाँदा पनि विभाजित भयो गुट–उपगुटले प्रभाव पा¥यो भन्छन् नि कार्यकर्ता ?
हो, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो । यो चाँही के थियो भने नेपाली काँग्रेस पार्टीले आफ्नो पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त आधारहरु राष्ट्रिय मुद्दा र नेपाली काँग्रेसको योगदान हुँदाहुँदै पनि २०७४ आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पार्टी अप्रत्यासित परिणाम भोग्न बाध्य भयो ।
त्यसलाई सच्याउँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउँदै पार्टी संगठन शुद्धिकरण र सुदृढिकरण गर्ने भनेर जागरण अभियान प्रारम्भ गरियो । यसमा पनि ठाउँ–ठाउँमा छिटफुट थोरै केही अभिव्यक्तिहरु परम्परागत शैलीमा नै देखा परे । आग्रह पूर्वाग्रहहरुनै देखा परे र ति आग्रह पूर्वाग्रहले पार्टीलाई जतिसम्म मजबुत गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो, त्यति मजबुत गर्न सकेन है भन्ने सम्बन्धित ठाउँका सम्बन्धित जनताहरुले पार्टी नेताहरुले अहिले हामी कहाँ उहाँहरुको सुझाव प्राप्त भएको छ ।
त्यसैले एकता हुन सकेन । तर हाम्रो अभियान सकिएको छैन । हाम्रो दोस्रो चरणको अभियान बाँकी छ । तेस्रो चरणको अभियान बाँकी छ । त्यसमा हामी सच्याउँदै फेरी केही कार्यविधि सच्याएर लिएर जान्छौं । केही नेता परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्छौं, कही हामी त्यसको विधि अपनाउँछौं र फेरी पनि पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा केन्द्रीय कार्यसमिति निरन्तर लाग्छ ।
तर तपाईहरु किन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकिरहनु भएको छैन ?
कुनै एउटा सुगरको बिरामीलाई चिनी नखानुस् है सुगर बढ्छ भनेको हुन्छ । तर उ केमा आकर्षित हुन्छ भने विगतमा त्यही चिनी भएको वा चिनीको मात्रा ज्यादा खाएको कारणले वा चिनी हुने वस्तु खाएका कारणले उ सुगरको बिरामी भएको हुन्छ । तर डाक्टर कहाँ बाट फर्किसकेपछि उ चिनीमा आकर्षित हुन्छ । उसलाई फेरी डाक्टरले नखा भनेसम्म खाइरहन्छ । यो चाँही मानवीय प्रवृत्ति हुन्छ । आन्तरिक विमतीका कारणले निर्वाचनमा आन्तरिक असहयोगका कारणले घात, अन्तरघातका कारणले आफै हारेका छन् ।
तथापी आफ्नो गुटको भएका कारणले त्यो अन्तरघात बचाउन पनि लागेका छन् । अनि फेरी अर्को समुहलाई दोष लगाउँदै भाषण गर्दै पनि हिँडेका छन्, भनेपछि यो के हो त भन्दा प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । संगठन शुद्धिकरण र सुदृढिकरण गर्नका लागि जसरी आफ्नो र अरुको पनि प्रवृत्ति सुधार हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । हामी आफैको पनि के भयो भने शुद्धिकरण र सुदृढिकरण अर्को साथी भइदिनु पर्ने म चाँही हुनु नपर्ने भन्ने छ ।
सामान्य सिद्धान्तले के भन्छ भने संसारमा परिवर्तन अरुबाट होइन आफुबाट गर्नुपर्छ । हर व्यक्तिले आफुलाई परिवर्तन ग¥यो भने संसार परिवर्तन हुन्छ भन्ने सरल मान्यता छ । यो मान्यतामा नेपाली काँग्रेस पार्टी विस्तारै रुपान्तरण होला तर विगतमा यो अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि विकराल अवस्था थियो त्यो अवस्थामा भने अत्याधिक मात्रामा परिवर्तन भएको हामीले पाएका छौं ।
हालै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनका विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस पार्टी पनि लागेको हो ?
नेपाली काँग्रेस पार्टी बीपी कोइरालाको पालादेखीनै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित पार्टी हो । विगतमा हामीले कानुन, ऐनमा परिवर्तन नगरी व्यवहारिक रुपमा संविधानको भावनालाई समेट्दै समावेशी बनाउँदै आएका थियौं । चाहे त्यो २०५२ को छात्रवृत्ति कार्यक्रम होस्, चाहे २०५४ को दलित विकास समितिको स्थापना होस् वा २०५८ मा महिला, दलित आयोग जनजाति प्रतिष्ठान गठन गर्ने होस् वा २०६२÷०६३ मा आइसकेपछि निजामति कर्मचारीमा ४५ प्रतिशत समावेशी गर्ने कुरा होस् हामीले त्यो आफैले गर्दै आएको हुनाले यो हाम्रो नीति हो ।
हामीले कार्यान्वयन गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले यसको पक्षमा जुनसुकै बेला पनि उभिन्छौं । तर अझै झन् नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिसकेको संविधानको धार ३८, ४० र ४२ मा व्यवस्था गरिसकेपछि दोहोरिने कार्यक्रममा भने व्यापक असमावेशीकरण, एकल जातीय ढंगबाट, एकल वर्गीय ढंगबाट निकालिसकेपछि त काँग्रेसले घोर आतंकनै प्रकट गरेको छ । मैले त संसद्मानै बोलेको छु ।
मसँग निकट भएका विद्यार्थी संगठनहरुले लोकसेवा आयोगमा गएर धर्ना गरेका छन् भने यिनीहरुका केही साथीहरुलाई पुलिसले समातेको छ । त्यसकारण यसमा हाम्रो लोकसेवा आयोगले ९१६१ वटा कोटा स्थानीय तहमा निकालेको छ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण रुपले पार्टीको पनि र मेरो पनि असहमति छ ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष उमेश मैनालीले त विज्ञापन परिमार्जन हुँदैन भनेर भनिसक्नु भयो नि त ?
मैले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको पनि अन्तर्वाता सुनेको छु । उहाँले सिधा भन्नुभएको छ, पहिला लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र थियो, त्यसकारण लोकसेवा आयोगले आफुले निकाल्दाखेरी समावेशीकरणको नीति अपनाउथ्यो रे । तर अहिले लोकसेवा आयोगलाई परिमार्जन गरेपछि मन्त्री परिषद्को परामर्श वा निर्देशनमा काम गर्ने चलन राखिएको छ, संवैधानिक अंगलाई पनि । मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सिमित गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिलको अधिकारलाई सञ्चार सचिवको मातहतमा सिमित गरिएको छ । त्यसैले अहिलेको यो सरकार निर्मम, निरंकुश, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भयो भनी यी चारओटा शब्द संसद्मा बोलेको छु । जुन कुरा प्रस्ट देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले सरकारले पक्षपात गर्छ, अनियमितता गर्छ भनेर संवैधानिक लोकसेवा आयोग बनाइएको हो । तर त्यसको ऐनमा लगेर, कार्यक्षेत्र सिध्याएर मन्त्री परिषद्मा लगियो र मन्त्रीपरिषद्को परिपत्रको आधारमा लोकसेवाको विज्ञापन निकालियो । त्यसैले अध्यक्षजीको भनाइ के छ भने कि तपाईहरु मन्त्री परिषद्मा भन्नुस्, कि तपाईहरु संसद्लाई भनेर ऐन मिलाउनुस्, कि तपाईहरु यि सबै कुरा स्थापित गराउनुस्, के सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न बनाइन्छ ।
त्यो प्रश्न भनेको सरकारले, मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर पठाइदिनुप¥यो । होइन भने सबैको ऐन आउने, होइन भने समावेशी ऐन चाँही अहिलेसम्म किन नआउने ? दुई वर्ष ऐन बनाउने भनेको थियो, दुई वर्ष त कटिसक्यो । त्यसकारणले यो सरकारले बद्धनियतपूर्ण ढंगबाट मुलुकलाई असमावेशीकरणतर्फ लाँदैछ । असमावेशीकरण गर्नु भनेको मुलुकमा फेरी अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउनु हो । त्यसकारण सरकारले यसो नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
तपाईले इटहरीको मेयरको चर्तिकलाको बारेमा थाहा पाउनुभयो ?
मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । मान्छे सालिन र सरलनै जस्तो लाग्थ्यो । एक त आदिवासीको छोरा । कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासनमा बसेको मान्छे । ठिकै हुनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो । तर त्यो सबै अभिव्यक्ति आफुले प्रत्यक्ष सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नै आवाजमा सुनिसकेपछि सायद मलाई लाग्छ मेयरको मानसिक अवस्था तथा कुनै न कुनै अतिरिक्त सोंचाई छ र उहाँ सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो लागेन ।
सरल कुरा के हो भने यदि उहाँ नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट मेयर बन्नु भएको थियो भने म केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हामी उहाँलाई सजिलै फिर्ता बोलाउ थियौ । पहिलो कुरा नेकपा पार्टीको प्रतिनिधी भएको हुनाले नेकपाले उहाँलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्छ र उहाँलाई हटाइदिनुपर्छ त्यहाँबाट । दोस्रो कुरा उहाँले गाली, बेइज्जती र मान्छे मार्ने धम्की समेत र सरकारी बजेटनै छुट्याएर गरेको भन्ने शब्दले गर्दा उहाँ त्यो पदमा कसरी बसिरहन सक्नु भएको छ । यहाँभन्दा विकृति र विकराल अवस्था कुनैपनि हुँदैन ।
उहाँलाई सरकारले फौजदारी अभियोग, गाली बेइज्जतीको आधारमा पनि कारवाही गर्नुपर्छ र पार्टीको आधारमा फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ ।
२०७६ जेष्ठ २७, ०९: ०६: ५५